I-Outsource yophando lweeInjini. Kuthiwani konke?
Ukuchithwa kweyona nto ayikho enye imbono. Kuye kwaba khona ixesha elide, kwaye lithetha ngokubaluleka kwe-Western frugality. Ukugqithiswa kwangena njani?
Ixabiso lokuhlawula lixabiso elikhulu kunoma yimuphi umbutho. Ekubeni iUnited States yaqala ukuhlangabezana nophuhliso lwezezimali, ukulindela ukunethezeka kwansuku zonke kwaqala ukukhula ngokukhawuleza. Namhlanje, phantse zonke iinkampani eziphumelelayo zisebenzisa abasebenzi abangaphandle - ejector design formula. Ukuphuculwa kweWebhu kuyafana ngendlela efana nale ndlela ilandela isicwangciso esifanayo.
3 Izizathu zokufumana ukuSebenza kweeNjini zoPhando
Ngaphambi kokuba ukhethe ukukhupha i-injini yakho yokwenza uphando, kubalulekile ukulinganisa iprojekthi.
Ukukhishwa kwewebhu kunqunyana nokugqithiswa kwesintu. Ngenxa yokuba lewebhu yinkqubo yomhlaba wonke, unakho ngaphandle komzamo onokufumana ulwazi olufunekayo kumcimbi wemizuzwana. Xa ukhetha ukuphuma kwe-injini ye-injini yokukhangela, ubunako bokungahambelani kwexabiso buncitshiswa kakhulu.
Lapha, indleko yolawulo ibonisa uhlobo lomsebenzi. Iibutho ezivela kwiintlanga eziphuhlisayo ziya kuba nethuba lokunika isaphulelo ngenxa yokungafani nokulindela ukunethezeka kwansuku zonke.
Njengoko ndacacisile, ukhetho olukhethekileyo kuwe ukusebenzisa ubuchule bentlangano engcono. Nangona kunjalo, inxalenye enkulu yabemi abemi ayinayo imali eninzi yokumisela inxaxheba. Ngenxa yokuntuleka kwemali, bathambekele ekwenzeni ukukhangela injini yokukhangela kwingozi yabo.
Iingcinga ezinkulu Zithatha ixesha elide
Ngokungafani nezinye iindlela ezizodwa, yinkqubo echitha ixesha. Intshukumo nganye yewebhu kufuneka ibe neofisi eyahlukileyo, eyokulawula kuphela lolu hlobo lweentengiso. Ukuphunyezwa kokunikezelwa kweenkonzo ze-SEO kuthatha ixesha, kodwa kuyafaneleka.
Abantu abaninzi bakhetha ukuqala ukuphuculwa kwewebhusayithi kwintsebenziswano ekuqwalaseleni ukuba kuyilungiselelo elide elide lokukhangela. Kukho nawuphi na, umxholo wekheshi uhlala.
Ngaba kukho naziphi na iingxaki zokuSebenzisa ii-SEO?
Njengoko bethetha, akukho luhlaza olungenawo ameva alo. Ukuxhatshazwa ngokubhekiselele kwintlangano yintsimo kuphela enokujamelana nayo xa usebenzisa i-SEO yakho. Mhlawumbi, lixesha lokuphuma ngaphandle kwe-injini yakho yokukhangela.